Maydadka Tahriibayaal dooni lasoo caaridey oo Boosaaso la keenay ( Sawiro ). – Radio Daljir
Maydadka Tahriibayaal dooni lasoo caaridey oo Boosaaso la keenay ( Sawiro ).
Diseembar 18, 2012 7:50 b 0
Boosaaso, Dec 18, Mayadadka dad tahriibayaal ah oo isugu Soomaali iyo Itoobiyaan ayaa ?ahaa kuwo shalay gelinkii danbe dooni ka raacay ?xeebaha gobolka Bari, Waxaana Doontaasi ku qalibantey meel aan aad uga durugsanayn magaaladda Boosaaso.
Dadka Doonidu la qalibantey oo tiradoodu dhamayd 60 ruux ayaa maydkooda la helay 18 kamid ah halka 4 kale nolol lagu hayo, Iyadoo aan ilaa hada la hayn meel ay ku danbeeyeen ?38 kamid ah dadkii Doonidaasi la socdey.
Masuuliyiinta maamulka gobolka Bari ayaan iyo laamaha amaanka ayaan ka hadlin dhacdadan iyagoo sheegay inay markale faah faahin ka bixin dooonaan, Waxaana Dawlada hoose ee degmadda Boosaaso wadaa abaabul lagu aasayo Maydadka dadka Tahriibayaasha ahaa.
Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Caafimaadka Dawlada Puntland Marwo Saynab Ugaas Yaasiin oo Saxaafadda kula hadashay Cusbitaalka Weyn ee magaaladda Boosaaso ayaa ku baaqday in dadku ka waantoobaan dhibaatooyinka Tahriibka maadaama xiligan ay arkeen dhibaatooyinka ka jira Badda.?
Sidoo kale Waxay sheegtay in Dawlada Puntland xiligan wado qorshayaal lagu soo afmeerayo dhibaatooyinka Tahriibka.
Qaar kamid ah dadkii eheladoodu ku dhinteen dhacdadan ayaa muujiyey dareen murugo leh oo ku aadan dhibaatooyinka Tahriibka, mid kamid ah hooyooyinka ku nool kaamamka Barakacayaasha ee magaalada Boosaaso oo dhacdadan ay kaga dhinteen laba gabdhood oo ay ehel ahaayeen ayaa Radio Daljir u sheegtay inay ugu war danbaysey gabdhahaasi maalin ka hor.
Tahriibka oo soconayey ilaa 1991 dii ayaa dadka Soomaaliyeed iyo Afikaan kale oo tirabadan waxaa kasoo gaadha dhibaatooyin badan iyadoo ay noloshooda ku waayeen kumanaan isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan.
Caawa iyo Daljir, salaasa, Dec 18, Axmed Nuur Ibraahim ‘Somali’ (Daljir Boosaaso)
C/raxmaan Sh Maxamed (Gablax) oo dhaliilay Xukuumadda Puntland